Waamicha Qabsoo Bifa Haaraadhaan Qeerroon Bilisummaa Oromoo Kan Yaame Fakkeessamee … – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooWaamicha Qabsoo Bifa Haaraadhaan Qeerroon Bilisummaa Oromoo Kan Yaame Fakkeessamee …
Waamicha Qabsoo Bifa Haaraadhaan Qeerroon Bilisummaa Oromoo Kan Yaame Fakkeessamee …
Ijoo Dubbii – ABO (SBO/VOL – Bitootessa 01, 2018) Gurraandhala 28,2018 irraa qabee “Waamicha Qabsoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa” jedhu media hawaasaa gara garaa irratti faca’uun mul’ateera. Akka barruu maqaa yaamicha qabsoo jedhuun Qeerroo Bilisummaa Oromoo maqaa dhahatee faca’e kanaatti Labsii Yeroo Muddamaa wayyaaneen labse, kan parlaamaan sirnichaa guyyaa boruu murtii itti kenna jedhamee dubbatamuun walqabatuu dha.
Sirnichii fi qaamotni tikaa wayyaanee maqaa Qeerroo Bilisummaa Oromootiin qabeenya nama dhuunfaa irratti miidhaa dhaqqabsiisuun achii as deebi’anii Qeerroo Bilisummaa maqaa bal’eessuu fi lammiilee irratti yakka raawwataa jiran daran hammeesuudhaaf karoorfatanii, darbees labsii yeroo muddamaa kanaan walqabsiisanii karoora lafa kaawwatan ittiin milkeessatuuf ta’uu odeessi gahaan argamee jira.
Sanas ta’e kana Waamicha Qabsoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa jechuun kan amma dhihaate kun jaarmaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa kan hin waamamne ta’uun beekamuu akka qabu ABOn ni hubachiisa.
Caalaatti Qeerroon Bilisummaa Oromoo labsa Fincila ilaalu kan dhihoo logo isaanii qabatee bahee as kan biraa akka hin baafne hubachiisanii jiran. Kanaaf jecha ummataa fi deeggartootni eeggannoo gochuun labsuma Qeerroo dhihoo logo qabatee bahe qofa akka hordofan yaadachiifna.
(Qeerroo) — Waamichi kutaalee Oromiyaa fi tarrisa gitoota hawaasaa qabatee maqaa Qeerroon gadhiifame faca’aa jiru qaama jaarmiyaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa akka hin taane ummata keenya beeksisaa ibsoota Qeerroo Bilisummaa irraa bahe hordofuun arrata Qeerroo kan ta’e Sagalee Qeerroo Bilisummaa(SQ) fi website Qeerroo irraa akka hordoftan deggersoota qabsoo bilisummaa Oromoo hunda beeksifna.